Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips tany Soisa, tamin'ny Summer | Save A Train
Home > Travel Europe > Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips tany Soisa, tamin'ny Summer
Mety azo lazaina fa Soisa no tena fanta-daza noho ny oram-panala tampon'isa ary matsiro sôkôla, Fa misy toy izany bebe kokoa ho ny firenena tsara tarehy noho mahafeno ny maso. Lamasinina Trips tany Soisa dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hankafy ny tsara tarehy ambanivohitra. Ataovy indrindra ny fotoana lany teo. The mafana Weather mahatonga ny dia Vao mainka mahafinaritra. Ireo no sasany amin'ireo Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips tany Soisa in Summer.
Ny Glacier Express eo St. Moritz sy Zermatt dia iray amin'ireo Train Trips tany Soisa
Izany angamba no iray amin'ireo tsara indrindra fantatra ny Soisa Toerana mahafinaritra fiaran-dalamby sy ny antony tsara. ny fiaran-dalamby diany eo St. Moritz sy Zermatt alalan'ny Chur, Andermatt, ary Brig. Tena feno fiarandalamby andro lavitra, fa maro ny olona hifidy ny hanao izany nandritra ny roa andro. Mandany fotoana amin'ny isan-karazany toerana teny an-dalana. Summer dia iray amin'ireo malaza indrindra fotoana handeha misy hatramin'ny efatra nivezivezy isan'andro over io fe-potoana. ny tena Toerana mahafinaritra anjara izany fiaran-dalamby nankany dia ny fizarana eo amin'ny Chur sy ny St. Moritz. Eto dia handeha eo amin'ny matetika-sary Landwasser viaduct izay mifarana amin'ny tonelina.
Ny Golden Pass-dalana, ho any Geneva
Tsy misy Train Trips tany Soisa, raha tsy misy mitaingina ny Golden Pass-dalana,. Ny fiaran-dalamby mandeha amin'ny Lake Lucerne ho any Geneva, na avy amin'ny Zurich an'i Geneva ho an'ireo izay manana kely kokoa ny fotoana eny an-tànany. Tsirairay lavitra toy mampitolagaga toy ny hafa. Misy fomba fijery ny valo Soisa ny farihy manga tsara tarehy, ny telo an-tendrombohitra hadilanana sy teo anelanelan'ny roa amin'ireo faritra fiteny (Frantsay sy alemà miteny Soisa). Dia nandray ny diany rehetra mitaky ara fiarandalamby imbetsaka fa ny zavatra hita dia mendrika izany. Mpandeha mila hamandrika ny seza amin'ny sasany ny fiaran-dalamby sy ny fiara. Aza adino ny drafitra mialoha noho izany diany!
Jungfraujoch Top ao Eoropa
Na dia mety ho Summertime tany Soisa no Tsy maintsy hahita ireo fotsy malaza tampon'isa taona rehetra manodidina ary raha oram-panala tendrombohitra izay tianao noho ny Jungfraujoch fiantsonan'ny dia toerana tokony hitsidika. Izany no ambony indrindra peo in Europe ary dia mety ho azo amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy any misambotra Kleine Scheidegg. Ny fomba fijery avy ao amin'ny fiaran-dalamby fitsangatsanganana any Soisa ny zavatra manokana sy ny dia mba misy ny tonga lafatra manaova-niakatra ho any amin'ny lehibe hitranga amin'ny farany. Ity diany dia tena iray mba hanampy ny lisitra.
Maro ireo fitsangatsanganana mampino fiaran-dalamby handray fa izy ireto no ambony indrindra eo anivon'ny Toerana mahafinaritra ny Train Trips ao Soisa ao amin'ny atsy ho atsy Summer. Inona no fomba tsara ho any mankafy ny masoandro ary alao any ny zava-mahagaga ity tany tsara tarehy noho ny amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby? Tsy afaka mieritreritra ny fomba tonga lafatra kokoa ny mahita Soisa izany afa-tsy vola ary ny fiaran-dalamby Travel.
Famandrihana tapakila ny lamasinina tao for Eoropa mandeha? Nahoana raha 3 minitra eo amin'ny toerana mba hahita mora indrindra lamasinina fitsangatsanganana any Soisa noho ny fiaran-dalamby lavitra. Login ny ny toerana ankehitriny ny Mampianatra bokin'ny tapakila.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
SwissAlps Train Travel fiaran-dalamby nankany travelswitzerland